ချယ်လ်ဆီးအသင်းမှာ ဘယ်သူတွေ တစ်ပတ်လစာ ဘယ်လောက်ရကြသလဲ
24 Aug 2018 . 8:14 PM
ဒီနွေရာသီမှာ ချယ်လ်ဆီးအသင်းဟာ နာပိုလီ ကွင်းလယ်လူ ယော်ဂျင်ဟို Jorginho ၊ ရီးယဲလ်ကွင်းလယ်လူ ကိုဗာချစ် Kovacic (အငှား)၊ ဘီလ်ဘာအိုဂိုးသမား ကီပါ Kepa Arrizabalaga ကို ဂိုးသမားတစ်ဦးအတွက် ကမ္ဘာ့စံချိန်တင် ပြောင်းရွှေ့ကြေး ပေါင်(၇၂)သန်းနဲ့ ခေါ်ယူခဲ့တာအပါအ၀င် ပေါင်(၁၂၃)သန်းအထိ သုံးစွဲခဲ့ပြီး နွေရာသီပြောင်းရွှေ့ကြေး အများဆုံးအသုံးပြုခဲ့တဲ့ အသင်းစာရင်းထဲမှာ ပါဝင်ခဲ့တယ်။ ချယ်လ်ဆီးအသင်းရဲ့ ကစားသမားတွေ တစ်ပတ်လစာ ဘယ်လောက်အထိ ရနေမလဲဆိုတာ ပရိသတ်တွေ သိချင်နေမှာပဲ။ ဒါကြောင့် ဒီရာသီ ချယ်လ်ဆီးအသင်းမှာ ဘယ်သူ လစာငွေ အများဆုံးရနေလဲဆိုတာကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ် . . .
19 Willy Caballero, £40,000 per week
18 Davide Zappacosta, £45,000 per week
17 Andreas Christensen, £65,000 per week
16 Victor Moses, £75,000 per week
15 Ross Barkley, £90,000 per week
14 Antonio Rüdiger, £90,000 per week
13 Marcos Alonso, £90,000 per week
12 César Azpilicueta, £100,000 per week
11 Gary Cahill, £100,000 per week
10 Pedro, £100,000 per week
9 Alvaro Morata, £100,000 per week
8 Jorginho, £102,000 per week
7 David Luiz, £120,000 per week
6 Olivier Giroud, £120,000 per week
5 Willian, £120,000 per week
4 N’Golo Kante, £120,000 per week
3 Cesc Fabregas, £156,000 per week
2 Kepa Arrizabalaga, £192,000 per week
1 Eden Hazard, £200,000 per week
ပရိသတ်ကြီးရေ .. ချယ်လ်ဆီးအသင်းက ကစားသမားတွေရဲ့ တစ်ပတ်လစာငွေကတော့ လန်ပြန်ထွက်နေတာပါပဲ။ Akhayar Sports ပရိသတ်တွေထဲက ချယ်လ်ဆီး Fans တွေလည်း ကိုယ်အားပေးတဲ့ ကစားသမား တစ်ပတ်လစာ ဘယ်လောက်အထိ ရနေလဲဆိုတာ သိအောင်လို့ အခုလို ဖော်ပြလိုက်တာပဲ ဖြစ်ပါတယ် . .
Photo:Stadium Astro,The Independent,Goal.com
ခယျြလျဆီးအသငျးမှာ ဘယျသူတှေ တဈပတျလစာ ဘယျလောကျရကွသလဲ
ဒီနှရောသီမှာ ခယျြလျဆီးအသငျးဟာ နာပိုလီ ကှငျးလယျလူ ယျောဂငျြဟို Jorginho ၊ ရီးယဲလျကှငျးလယျလူ ကိုဗာခဈြ Kovacic (အငှား)၊ ဘီလျဘာအိုဂိုးသမား ကီပါ Kepa Arrizabalaga ကို ဂိုးသမားတဈဦးအတှကျ ကမ်ဘာ့စံခြိနျတငျ ပွောငျးရှကွေ့ေး ပေါငျ(၇၂)သနျးနဲ့ ချေါယူခဲ့တာအပါအဝငျ ပေါငျ(၁၂၃)သနျးအထိ သုံးစှဲခဲ့ပွီး နှရောသီပွောငျးရှကွေ့ေး အမြားဆုံးအသုံးပွုခဲ့တဲ့ အသငျးစာရငျးထဲမှာ ပါဝငျခဲ့တယျ။ ခယျြလျဆီးအသငျးရဲ့ ကစားသမားတှေ တဈပတျလစာ ဘယျလောကျအထိ ရနမေလဲဆိုတာ ပရိသတျတှေ သိခငျြနမှောပဲ။ ဒါကွောငျ့ ဒီရာသီ ခယျြလျဆီးအသငျးမှာ ဘယျသူ လစာငှေ အမြားဆုံးရနလေဲဆိုတာကို ဖျောပွပေးလိုကျပါတယျ . . .
ပရိသတျကွီးရေ .. ခယျြလျဆီးအသငျးက ကစားသမားတှရေဲ့ တဈပတျလစာငှကေတော့ လနျပွနျထှကျနတောပါပဲ။ Akhayar Sports ပရိသတျတှထေဲက ခယျြလျဆီး Fans တှလေညျး ကိုယျအားပေးတဲ့ ကစားသမား တဈပတျလစာ ဘယျလောကျအထိ ရနလေဲဆိုတာ သိအောငျလို့ အခုလို ဖျောပွလိုကျတာပဲ ဖွဈပါတယျ . .